Xarunta Xamuulka ee EV
Noocyada kala duwan ee Xidhiidhiyayaasha Keenista EV
Waxaa jira sababo badan oo loo tixgeliyo inaad u beddesho mid ku shaqeeya koronto oo ka imanaya baabuur baasiin ku shaqeeya.Baabuurta korontadu way xasilloon yihiin, waxay leeyihiin kharashaad hawlgal oo aad u yar waxayna si fiican u soo saaraan qiiqa guud. Si kastaba ha ahaatee, baabuurta korontada iyo furayaasha oo dhan si isku mid ah looma abuuro. Xiriiriyaha lacag -bixinta EV ama nooca caadiga ah ee fiilada ayaa si gaar ah ugu kala duwan juqraafiyada iyo moodooyinka.
Sideen ku ogaan karaa koronto-geliyaha gaariga korontada isticmaalaya?
In kasta oo barashadu u ekaan karto wax badan, haddana waa wax aad u fudud runtii. Dhammaan baabuurta korontada waxay isticmaalaan isku -xiraha kaas oo ah halbeegga suuqyadooda heerka 1 iyo heerka 2 ku -dallacidda, Waqooyiga Ameerika, Yurub, Shiinaha, Japan, iwm. awoodda heerka suuqa. Heerarka Tesla Heerka 1 ama 2 sidoo kale waxaa isticmaali kara baabuurta korontada ee aan Tesla ahayn, laakiin waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan adabtarada laga iibsan karo iibiyaha dhinac saddexaad. Ku dallacidda degdegga ah ee DC, Tesla wuxuu leeyahay shabakad lahaansho ah oo ah saldhigyada Supercharger oo kaliya baabuurta Tesla ay isticmaali karaan, majiro wax ka shaqeeya saldhigyadaas maxaa yeelay waxaa jira hab xaqiijin ah. Baabuurta Nissan iyo Mitsubishi waxay adeegsadaan jaangooyaha Japan ee CHAdeMO, iyo ku dhawaad ​​baabuur kasta oo koronto ku shaqeeya ayaa adeegsada cabirka CCS.
Heerarka Waqooyiga Ameerika Nooca 1 EV Plug
Nooca 1 EV Socket
Heerarka Yurub IEC62196-2 Nooca 2 Xidhiidhiyeyaasha EV
Nooca 2 Godka Galinta
Xidhiidhiyayaasha Nooca 2 waxaa badanaa loo yaqaan 'Mennekes' isku xirayaasha, ka dib soo saaraha Jarmalka ee ikhtiraacay naqshadda. Waxay haystaan ​​fiilo 7-pin ah. Midowga Yurub wuxuu ku talinayaa isku-xirayaasha Nooca 2 waxaana mararka qaarkood lagu tilmaamaa heerka rasmiga ah ee IEC 62196-2.
Noocyada isku xiraha ku dallaca EV ee Yurub waxay la mid yihiin kuwa Waqooyiga Ameerika, laakiin waxaa jira dhowr kala duwanaansho. Marka hore, korontada caadiga ah ee reerku waa 230 volts, ku dhowaad laba jibbaar inta la isticmaalo Waqooyiga Ameerika. Ma jirto "ku -dallac 1" oo lacag lagu dallaco Yurub, sababtaas awgeed. Midda labaad, halkii laga xiriirin lahaa J1772, IEC 62196 Type 2 connector, oo badanaa loo yaqaanno mennekes, waa halbeegga ay isticmaalaan dhammaan soosaarayaasha marka laga reebo Tesla ee Yurub.
Si kastaba ha noqotee, Tesla wuxuu dhowaan ka beddelay Model 3 oo ka yimid xiriiriyaha lahaanshaha oo u beddelay isku xiraha Nooca 2. Gawaarida Tesla Model S iyo Model X ee lagu iibiyo Yurub ayaa wali isticmaalaya isku xiraha Tesla, laakiin mala -awaalka ayaa ah in iyagana ay aakhirka u wareegi doonaan isku xiraha Nooca 2 ee Yurub.
Isku -xiraha CCS Combo 1
CCS waxay u taagan tahay Nidaamka Isku -darka Bixinta.
Nidaamka Isku -darka Bixinta (CCS) wuxuu daboolayaa Combo 1 (CCS1) iyo Combo 2 (CCS2).
Laga soo bilaabo dabayaaqadii 2010 -kii, jiilka xiga ee xeedho -yaasha ayaa isku darsaday Type1 / Type 2 chargers oo leh isku -xiraha DC ee qaro weyn si loo abuuro CCS 1 (Waqooyiga Ameerika) iyo CCS 2.
Isku -xiraha isku -dhafan micnaheedu waa in baabuurku la qabsan karo taas oo ah inay ka qaadan karto AC lacag -qaade isku -xiraha badhka sare ama ka -qaadidda DC -ka iyada oo loo marayo labada qaybood ee isku -xiraha. Tusaale ahaan, Haddii aad baabuurkaaga ku haysato CCS Combo 2 ku shub guriga AC, waxaad si fudud ugu dhejisaa furaashka Nooca 2 ee caadiga ah qeybta sare. Qaybta hoose ee DC ee isku xiraha ayaa ah mid madhan.
Yurub gudaheeda, ku dallacidda degdegga ah ee DC waa isku mid sida Waqooyiga Ameerika, halkaas oo CCS ay tahay halbeegga ay adeegsadaan dhammaan soo -saareyaasha marka laga reebo Nissan, Mitsubishi. Nidaamka CCS ee Yurub wuxuu isku daraa isku xiraha Nooca 2 oo leh biinanka degdegga ah ee jiidista dc sida J1772 -ka isku xira Waqooyiga Ameerika, sidaa darteed iyada oo sidoo kale loogu yeero CCS, waa isku -xire waxyar ka duwan. Model Tesla 3 hadda wuxuu adeegsadaa isku xiraha CCS ee Yurub.
Jaangooyaha Jaangooyada Japan ee CHAdeMO & Socket Inlet CHAdeMO
CHAdeMO: Adeegga reer Japan ee TEPCO wuxuu sameeyay CHAdeMo. Waa halbeegga rasmiga ah ee Jabaaniyiinta iyo ku dhawaad ​​dhammaan jaakadaha degdegga ah ee Jabaan ee DC waxay adeegsadaan isku xiraha CHAdeMO. Way ka duwan tahay Waqooyiga Ameerika halkaas oo Nissan iyo Mitsubishi ay yihiin soosaarayaasha kaliya ee hadda iibiya gawaarida korantada ee adeegsada isku xiraha CHAdeMO. Baabuurta korontada ee kaliya ee adeegsata nooca isku xiraha ku dallacidda CHAdeMO EV waa Nissan LEAF iyo Mitsubishi Outlander PHEV. Kia wuxuu ka tagay CHAdeMO 2018 wuxuuna hadda siiyaa CCS. Xidhiidhiyayaasha CHAdeMO ma wadaagaan qayb ka mid ah isku xiraha gelitaanka J1772, oo ka soo horjeeda nidaamka CCS, sidaa darteed waxay u baahan yihiin gelitaan dheeraad ah oo ChadeMO ah oo gaariga saaran Tani waxay u baahan tahay deked lacag badan
Tesla: Tesla wuxuu isticmaalaa isla Heerka 1, Heerka 2 iyo DC isku xirayaasha lacag -bixinta degdegga ah. Waa isku -xiraha Tesla ee lahaanshaha ah oo aqbala dhammaan danabyada, sidaa darteed sida heerarka kale u baahan yihiin, looma baahna in la helo isku -xire kale oo si gaar ah loogu dallaco DC degdeg ah. Gawaarida Tesla oo kaliya ayaa isticmaali kara xeedho -dhaqso DC -ka ah, oo la yiraahdo Superchargers. Tesla ayaa rakibtay oo dayactirtay saldhigyadan, waxayna u yihiin adeegsi gaar ah macaamiisha Tesla. Xataa iyada oo leh fiilo adabtarada ah, suurtogal ma noqonayso in laga qaado lacag aan ahayn tesla EV saldhigga Tesla Supercharger. Taasi waa sababta oo ah waxaa jira geedi socod xaqiijin oo u tilmaamaya baabuurka inuu yahay Tesla ka hor inta uusan bixin awoodda. Ku -dallacsiinta Tesla Model S ee safarka wadada iyada oo loo marayo Supercharger waxay ku dari kartaa ilaa 170 mayl oo kala duwan 30 daqiiqo gudahood. Laakiin nooca V3 ee Tesla Supercharger wuxuu kor u qaadaa soosaarka korantada oo laga bilaabo ilaa 120 kilowatts ilaa 200 kW. Superchargers -ka cusub oo la hagaajiyay, oo la bilaabay 2019 oo sii socda si loo sii ambaqaado, ayaa xawaaraha wax ku kordhiya boqolkiiba 25. Dabcan, baaxadda iyo ku dallacidda waxay ku xiran tahay arrimo badan - laga soo bilaabo awoodda batteriga ee baabuurka illaa xawaaraha lacag -haynta ee xeedho -fuulaha dushiisa, iyo in ka badan - sidaa darteed “masaafadaadu way kala duwanaan kartaa.”
Shiinaha GB/T EV Isku -xiraha Bixinta
Shiinaha GB/T Isku -xiraha DC
Shiinaha DC GB/T Inlet Socket
Shiinaha ayaa ah suuqa ugu weyn - illaa hadda - baabuurta korontada.
Waxay diyaariyeen nidaamkooda lacag -bixinta, oo si rasmi ah loogu tixraaco heerarkooda Guobiao sida: GB/T 20234.2 iyo GB/T 20234.3.
GB/T 20234.2 wuxuu daboolayaa ku-dallacidda AC (hal-waji kaliya). Fiilooyinka iyo baloogyadu waxay u eg yihiin Nooca 2, laakiin biinanka iyo soo -dhoweeyeyaasha waa la rogaa.
GB/T 20234.3 wuxuu qeexayaa sida degdegga ah ee lacag -bixinta DC u shaqeyso. Waxaa jira hal nidaam oo ku-dallacsiinta DC-ka ah oo ku yaal Shiinaha, halkii laga heli lahaa nidaamyada tartamaya sida CHAdeMO, CCS, Tesla-modified, iwm, oo laga helo dalal kale.
Waxa xiiso leh, Ururka CHAdeMO ee fadhigiisu yahay Japan iyo Golaha Korontada Shiinaha (oo gacanta ku haya GB/T) ayaa ka wada shaqeynaya nidaam deg deg ah oo DC ah oo loo yaqaan ChaoJi. Bishii Abriil 2020, waxay ku dhawaaqeen borotokoolladii ugu dambeeyay ee loo yaqaan CHAdeMO 3.0. Tani waxay u oggolaan doontaa ku dallacidda in ka badan 500 kW (xadka xadka 600) waxayna sidoo kale bixin doontaa lacag -bixin laba dhinac ah.Iyadoo la tixgelinayo Shiinaha ayaa ah macaamilka ugu weyn ee EVs, iyo in dalal badan oo goboleed ay u badan tahay inay ku biiraan oo ay kujirto Hindiya, CHAdeMO 3.0 / ChaoJi hindisaha ayaa laga yaabaa inuu si wanaagsan u rido CCS waqti ka dib maadaama uu yahay awoodda ugu weyn ee lacag -bixinta.